Food Court Supervisor _ (M/F) _ (2) Posts at City Properties Co.,Ltd | MyJobs
/ Food Court Supervisor _ (M/F) _ (2) Posts
Food Court Supervisor _ (M/F) _ (2) Posts
- Any Graduated. - Good proficiency in computer (MS Office) skills - Minimum 1 or2years experience in the related field.
Food Court Admin Supervisor
Tenant များမှ Center မှချမှတ်ထားသောစည်းကမ်းများကို
လိုက်နာမှု့ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပေးရန်။
Utensil များကို နေ့စဉ် စစ်ဆေးရန် အတွက် ကြီးကြပ်ပေးရန်။
Hygiene Standard များအား Food Court တွင်းရှိ စားသောက်ဆိုင်များမှ ၀န်ထမ်းများက အမှန်တကယ်
ထိန်းသိမ်းလိုက်နာခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးရန်။